Amaholide e-Stienitzsee encane - I-Airbnb
Amaholide e-Stienitzsee encane
Rüdersdorf bei Berlin, Brandenburg, i-Germany
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Korinna
U-Korinna Ungumbungazi ovelele
Ifulethi litholakala esitezi sokuqala sendlu yethu enemindeni emibili. Sihlala efulethini eliphansi futhi sinengadi enkulu engasetshenziselwa ukuphumula nokosa ehlobo ngokuhlelwa. Izinkukhu zethu ezi-5 zivame ukuletha amaqanda amaningi kangangokuthi singathanda ukunikeza amanye. Ukubuka enyakatho kuya eStienitzsee encane. Buduze nengadi yethu kunendawo yokugezela yomphakathi eseStienitzsee encane eSeestrasse.
Ifulethi lonke lino-83m², wonke amawindi abheke emgwaqweni anezimpumputhe zikagesi zokukhanya nokuvikela ukushisa. Ikhishi elifakiwe lifakwe kahle. Isihlalo esiphezulu kanye nombhede wokuhamba kuyatholakala ezivakashini ezinezingane ezincane.
Kukhona izixhumanisi ezinhle zokuhamba ngebhasi, isitimela noma imoto yakho ibheke eBerlin noma ngokwesibonelo. kuya ku-Buckow, ku-"Märkische Schweiz". Indawo yonqenqema olusempumalanga ibonakala ngaphezu kwakho konke ngamanzi amaningi, ihlathi kanye nezindawo zokuvikela indawo. Maningi amathuba okugibela izintaba nokuhamba ngebhayisikili.
Njengoba siseduze nendawo emaphakathi nedolobhana, indawo yokuphuzela u-ayisikhilimu, umbhoshongo wezigwaca kanye ne-Stienitzsee enkulu enezindawo zokugeza zomphakathi azikude nazo. Lapho isimo sezulu sihlanzekile, ungakwazi ngisho nokubona umbhoshongo wethelevishini eBerlin uphezu kombhoshongo wezigwaca. E-Strausberg (3 km) kanye ne-Grünheide (11 km) kunehlathi elikhuphukayo lemisebenzi yokuzijabulisa esebenzayo. Kuma-anglers asebenzayo, indawo yethu inikezela ngamathuba amaningi emachibini, kodwa futhi nendawo yenhlanzi yezinhlanzi i-Klein Wall, eduze kwase-Alt-Buchhorst (18.5 km). Ungathatha ngisho nohambo lwe-steamboat ukusuka e-Alt-Buchhorst noma ukhiye we-Woltersdorf ku-Flakensee ukuya e-Berlin. https://www.reederei-kutzker.de/
Ipaki yemnyuziyamu emayini evulekile yase-Rüdersdorfer enamahhavini aseRumford kufanelekile kakhulu ukuyibona. https://www.ruedersdorf-kultur.de/
Ich bin Chefin eines erfolgreichen Familienunternehmens...
Njengoba izimo zisivumela, kuhlale kukhona othile ekhaya ngakho singaphendula imibuzo noma izicelo zezivakashi zethu. Sihlale sibheke phambili ekukhulumeni nabantu abajabulisayo futhi singakunikeza amathiphu amahle okuthi ungasichitha kanjani isikhathi sakho samahhala.
Njengoba izimo zisivumela, kuhlale kukhona othile ekhaya ngakho singaphendula imibuzo noma izicelo zezivakashi zethu. Sihlale sibheke phambili ekukhulumeni nabantu abajabulisayo fu…
UKorinna Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Rüdersdorf bei Berlin namaphethelo